Ukuhlanganisa izinkinobho ze-Retweet kubhulogi lakho le-WordPress | Martech Zone
NgoMsombuluko, Septemba 21, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-Twitter ikhula njengesisetshenziswa esihle kakhulu sethrafikhi efanele kumasayithi nakumabhulogi. Ngikhuthaza wonke amaklayenti ami ukuthi asebenzise i-RSS ku-Twitter ezenzakalelayo ngokusebenzisa amathuluzi afana nalawa I-Hootsuite or Twitterfeed. Ngingakukhuthaza futhi ukuthi uhlanganise ikhono lezivakashi ezenza iTwitter ngqo kusuka kubhulogi yakho.
Ngiye ngavivinya izinsizakalo ezimbalwa, kufaka phakathi ama-plugins we-WordPress ambalwa… futhi ekugcineni nginqume ukuhlanganisa i-Retweet Button ye-Twitter. Ngithanda ukusebenzisana okunikezwa ukuhlanganiswa. Ngenkathi okunye ukuhlanganiswa kudinga ukuthi uchofoze, bese uthumela kusuka ku-Twitter, le nkinobho ikuvumela ukuthi ungene ngemvume kanye futhi udinga nje ukuchofoza inkinobho ye-Retweet futhi usuqedile. Noma yini elula izophumela ekusetshenzisweni okukhulu uma kukhulunywa kuwebhu!
Amanye ama-plugin awakuvumeli ukuthi uyithole kahle inkinobho. Ngifuna okwami ​​ngqo ngokuhambisana nomuntu ofunda isihloko seposi. Uma isihloko sami seposi singaphezu komugqa owodwa… inkinobho iyavuka iyehla njengoba ngikwazi ukuyibeka ngokuqukethwe kwami ​​kokuthunyelwe. Ngenxa yalokho, ngayihlanganisa ngesandla ngokubeka le khodi elandelayo ngaphezu kwesihloko sami sePosi ekhasini lami eliyinhloko lenkomba, ingobo yomlando namakhasi wesigaba nekhasi elilodwa leposi ngaphakathi kwetimu yami:
AmaTweets Okudumisa Osaziwayo Alapha!
Sep 22, 2009 ku-8: 20 AM
ngenxa yelukuluku nje uDoug ikhona yini indlela yokukhetha usayizi wenkinobho - enkulu noma encane
Sep 23, 2009 ku-3: 46 AM
Sawubona Steven! Uqinisekile unga - ungangeza uhlobo oluhlanganisiwe ngokungeza: tweetmeme_style = 'compact'; kuskripthi.
I-Oct 5, i-2009 ku-12: i-51 PM
Ngiyabonga uDouglas - lokho kube wusizo. Bengisebenzisa i-plugin yeWordPress kepha ngithole lesi sixhumanisi futhi nganquma ukuhamba nendlela "yezandla" ethe xaxa!
Okthoba 6, 2009 ngo-1: 43 AM
Sawubona. Nginentshisekelo yokwenza lokhu futhi, kepha kubonakala ngathi angikuhleleli kahle. Uma ngiyibeka ngaphezu kwekhodi yesihloko seposi ekhasini elilodwa esikhundleni sokuhlala ngakwesokunene sesihloko futhi ngokuhambisana nayo, isicindezela phansi isihloko. Ungachaza ukuthi ngenzani okungalungile. Ngiyabonga.
Jun 18, 2011 ku-11: 04 PM
Lokhu kuvuselelwa ukuze umbhalo ofanelekile kanye nesixhumanisi kugcwaliswe ngaphakathi kwekhasi ngezinkinobho eziningi ze-Twitter njengekhasi le-Index ne-Category noma amakhasi we-Archive. Akudingeki ukuthi ungeze i-data-url nedatha yombhalo kumakhasi weposi elilodwa - i-Twitter izodonsa imininingwane kusihloko sekhasi naku-URL yezincwadi.